Wafti ka socda dawladda Puntland oo Muqdisho u tagay muran iyo madmadaw ka soo laabtay deeqdii waxbarasho ee dawladda Turkiga. – Radio Daljir
Wafti ka socda dawladda Puntland oo Muqdisho u tagay muran iyo madmadaw ka soo laabtay deeqdii waxbarasho ee dawladda Turkiga.
Oktoobar 30, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Oct 30 – Wafti ka socda dawladda Puntland ayaa dhawaan gaaray magaalada Muqdisho si ay ugu kuurgalaan, una xalliyaan mad-madaw lama filaan ah oo ka dhashay deeqdii waxbarasho ee dawladda Turkigu ugu talo gashay Soomaaliya gaar ahaanna middii loo qoondeeyey Puntland.
Waftigaan oo uu hoggaaminayey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamud Maxamed Iddiris ayaa socdaalkoodu ku salaysnaa sidii wax looga qaban lahaa is-baddal ku yimid qaabkii deeqeed ee Turkiga, taasoo dhalisay in qaar badan oo ka mid ah ardaydii reer Puntland ee ku guulaysatay imtixaamaadkii loo galay ay waayaan Jaamacadihii dibadda.
Wasiirka ku-xigeenka waxbarashada Puntland Maxamud Maxamed Iddiris, oo aan maanta telefonka ku waraysannay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay wax badani u qabsoomeen, laguna rajo weyn yahay in ardayda Puntland ee ku guulaysatay deeqdaasi kaddibna waayey ay dib u heleen deeqo kale oo mardhaw la filayo.
Wasiirku, waxaa uu intaasi ku daray ardadii Puntland ee ku sugnayd Muqdisho in ay ku amreen in ay dib ugu laabtaan deegaannadii ay ka yimaadeen, waxaana kuwa kale ee wali ku sugan Puntland-na uu u sheegay in ay halkooda ku sugnaayeen illaa illaa iyo inta ay soo baxayaan fursado kale.
NATO oo soo afjaraysa hawlgalkii Libya
Garowe oo lagu soo bandhigay wajigii 2-aad ee barnaamijka tiirarka dimuqraaddiyadda Puntland.